Dominik Mysterio ndiyo yaive nzvimbo yekutarisisa panguva yaRey Mysterio kupokana naEddie Guerrero - Wwe
'Aive munhu chaiye' -Vickie Guerrero akataura nezvekuti Dominik Mysterio akabata sei nyaya yekuchengetwa
Muna 2005, Dominik Mysterio akange ari nyaya yemakakatanwa marefu pakati pababa vake Rey Mysterio uye WWE Hall yeN Famer Eddie Guerrero. Ivo vaviri veWWE Superstars vairwa kurwira kwekuchengetwa pamusoro peDominik mukati medenderedzwa.
Kupokana kwakaramba kuripo kusvika SummerSlam, uko Rey Mysterio akakunda Eddie Guerrero mumatanho emanera kuti akunde kodzero yekuchengeta Dominik. Yakanga iri imwe yenyaya dzisingakanganwiki muEddie Guerrero, Rey Mysterio, uye ikozvino mabasa ekurwira mutsimba aDominik Mysterio.
Zvino, angangoita makore gumi nematanhatu gare gare, Dominik Mysterio anozviwana achigovana mhete nababa vake, sehafu yevaikwikwidza veSmackDown tag timu.
Aimbove WWE Superstar uye mushakabvu Eddie Guerrero aimbova mukadzi, Vickie Guerrero achangobva kuoneka pa Imba Yedu Podcast , kwaakatsanangura mabatiro akaita Dominik Mysterio nyaya yese yekuchengetwa, achimuti iye 'wechisikigo'.
'Akanga ari echisikigo, sekuziva kwako nevasikana vangu ivo vese vaive nechokuita nechiwrestling chigadzirwa Muvhuro neChishanu wega wega unoziva isu tese tiri kutarisa mutsimba saka vana, Dominic nevasikana vangu. Zvaive zviri nyore kwavari kuti vatevere nyaya dzenyaya kunyanya pakaitika Rey naEddie. Isu takango tevedzera kutevedzera kunakirwa nenyaya yacho saka Dominic aive - aive nehunyanzvi kwazvo. ' akadaro Vickie Guerrero (H / T: Imba Yedu Podcast )
Dominik Mysterio akura kuita anokwanisa-muimbi anoita uye anofanirwa kuve nebasa rakareba uye rakabudirira seWWE Superstar. Izvo zvakanaka kuti uzive kuti aive nehunyanzvi hwepamoyo iye achiri mwana zvakare.
Dominik Mysterio anga ari kune rimwe divi rekurwiswa kwakaipisisa kubva kuhutongi hwevaRoma
Dominik Mysterio munguva pfupi yapfuura akahwina mazita eSmackDown Tag Team pamwe chete nababa vake Rey Mysterio kuWrestleMania Backlash. Yakanga iri nguva hombe, sezvo ivo vakave ivo vekutanga baba-mwanakomana duo kuhwina iwo mazita eteki.
Vavengi vavo vekutanga semakwikwi vaive maUsos, sezvo Jimmy Uso ari kudzoka akawana Adam Pearce kuti vaite mutambo wepamutemo zvichitevera kuhwina kwavo muStreet Profits.
Nehurombo, iyi mitambo yakanangana neiyo Usos haina kupera zvakanaka kuna Dominik, sezvo akarwiswa zvine utsinye neVatongi veRoma. Izvozvowo zvakaitika svondo rakatevera baba vake pavakasheedzera Sabhuku wedzinza.
CHII CHINO @WWeromanReigns WAITA?!?! #SmackDown @reymysterio @ DomMysterio35 @HeymanHustle pic.twitter.com/cfWKzuTEjn
- WWE (@WWE) Chikumi 12, 2021
Izvi zvaizopedzisira zvaendesa kuGehena muCell Match yeUniversal Championship, iyo yakaitika paSmackDown - imwe yakaraswa naRey Mysterio zvinosiririsa.
Chii chaunofunga kuti chinotevera kune Dominik Mysterio? Goverana pfungwa dzako nesu muchikamu chemashoko pazasi.
yakasungirirwa kubwinya 2017 mhedzisiro
kurega kumira kunzwa seakakundikana
chii chakaitika mushure mambishi yabuda mumhepo nezuro husiku
ko vakomana vanofarira kutaura pafoni